Xaaladihii u danbeeyey ee khilaafka Dawladda Federaalka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xaaladihii u danbeeyey ee khilaafka Dawladda Federaalka
Xaaladihii u danbeeyey ee khilaafka Dawladda Federaalka
Kadib markii maalintii shalay fadhigii Baarlamaanka uu hareeyey buuq iyo xaalad aan deganayn, kaas oo u dhexeeyey Shiikh Adan Madoobe iyo Xildhibaano diidanaa in uu shirka u guddoomiyo.
Xildhibaanada diidanaa Shiikh Adan MAdoobe ayaa guddoomiye kumeelgaar ah u doortey ninka ugu da’da weyn Baarlamaanka Xaaji Shukri, Xaaji Shukri ayaa isla xalay kulamo la qaatey Madaxweynaha Dawladda Federaalka Shiikh Shariif iyo Raysalwasaaraha, waxyaabaha ay ka wada hadleen lalama socdo, waxaase la filayaa in ay ka wadahadleen arimihii shalay ka dhacay baarlamaanka iyo isbedelka yimid.
Madaxaweynaha oo ay ahayd in uu furo kalfadhiga baarlamaanka isla markaana ka baaqsadey ayaa lagu wadaa in uu maanta qabto shir saxaafadeed uu ku taageerayo mawqofka lagu doortey Xaaji Shukri, waxaana hadda kasocda Madaxtooyada qabanqaabada shirkaas jaraa’id.
Xaaji Shukri oo ah ninka loo doortey kusimaha Gudoomiyaha ayaa durba la siiyey maamuuska Guddoomiyanimo, waxaana amaankiisa la wareegay ciidanka AMISOM.
Shiikh Adan Madoobe oo haysta xildhibaano taageersan kuwaas oo aad uga yar kuwa ka soo horjeeda ayaa weli ku adkeysanaya in uu isagu yahay Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka, si kastaba ha ahaatee waxaa goordhaw la sugayaa waxa ka soo baxa Villa Somalia halkaas oo saxaafadda looga yeeray.